Kedụ ka PPC si eme ka azụmaahịa inbound dị elu | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 19, 2013 Monday, October 12, 2015 Jenn Lisak Golding
Otu n'ime mkparịta ụka buru ibu nke na-aga taa bụ otu esi ewepụta ego gị na mbọ ị na-agba n'ahịa. Ndị ahịa, na nkezi, na-eji usoro 13 dị iche iche na atụmatụ ha iji dọta ụzọ ọhụrụ (isi: Ụlọọrụ Marketing Content), gụnyere infographics, blogging, email campaign, videos, wdg .Ya mere, olee otu anyi si achota ebe anyi agha ya na ego anyi agha?
Atụmatụ ahia ahia dị iche iche maka azụmaahịa na ụlọ ọrụ ọ bụla. Ego mmefu ego dikwa iche. Mana akụkụ dị mkpa nke usoro ọ bụla inbound marketing na-eji akụ dịnụ dị ka o kwere mee iji wee na-eduga ndu. Otu ụzọ esi egosi nsonaazụ bụ ịkwụ ụgwọ kwa Pịa (PPC), m na-atụ aro itinye ego a na-akwụ ụgwọ kwa ụbọchị.
Maka ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ahịa m, na-akwụ ụgwọ maka ịpị mkpọsa ọ bụla ma ha na-arụ ọrụ. N'ihi gịnị? N'ihi na anyị na-arụ ọrụ na nke anyị Ndị mmekọ PPC, EverEffect, na ndị ahịa anyị ka:
hone na njikọta isiokwu dị mkpa (organic na ugwo) maka mkpọsa PPC
wepụta oge iji chọpụta otu ị ga-esi belata ọnụ ahịa ha na-enweta (CPA)
igbunye a mmefu ego maka PPC mkpọsa kwa ọnwa
Yabụ, PPC na-arụ ọrụ, mana ọ na - ewe oge iji gosipụta nsonaazụ, dị ka ụzọ ịzụ ahịa ahịa ọ bụla ọzọ.
Akụkụ nke usoro a na-achọpụta nke isiokwu ndị na-arụ ọrụ maka ndị na-asọmpi ma nwee nghọta ka mma banyere ebe asọmpi. Anyị na Ispionage rụkọrọ ọrụ, oke search ahịa ngwá ọrụ, iji mepụta infographic banyere otu PPC mkpọsa nwere ike isi mee ka atụmatụ ịzụ ahịa inbound gị ka mma. N’okporo ụzọ, anyị hụrụ ụfọdụ nnukwu stats banyere ihe kpatara PPC ji arụ ọrụ maka onye ọ bụla site na ụlọ ahịa mama & Pop gaa nnukwu ụlọ ọrụ (yana ihe kpatara Ispionage ji enyere ndị mkpọsa aka).
Tags: inbound ahịa atụmatụmarketing atụmatụkwuo ụgwọ kwa Pịappc mkpọsaChọọ Marketing
RDM na - eme nyocha Adwords PPC n'efu, naanị kpọọ ha na 256-398-3835
Agwawo m ọtụtụ ụlọ ọrụ PPC, mana ihe kachasị mkpa ị nwere ike ime maka mgbasa ozi ahịa gị bụ iweta peeji. Imirikiti ụlọ ọrụ na-ere gị 1 otu ihe dị ka imewe weebụ, ma ọ bụ naanị Google Adwords, ma ọ bụ naanị popups, ma ọ bụ naanị na-echegharị wdg. Nke a bụ kpam kpam n'ihi na ọ bụ ezie na ihe 1 nwere ike ime mgbanwe na mkpọsa ahịa ahịa, ọ nweghị otu mmewere Ego ma ọ bụ imebi mmewere na online ahịa, ị chọrọ dum ngwugwu, na mgbe ahụ na-amuma / na-ebuli si n'ebe.M azụmahịa m ụba mụbara site n'elu 60% na ọnwa abụọ ozugbo m họọrọ a ezi gị n'ụlọnga na mere ihe karịrị nanị PPC, ma emekwara m ọdịda peeji, retargeting, ọkọlọtọ mgbasa ozi, wdg. N'eziokwu, enwere m nọmba ekwentị Simon ebe a, ị nwekwara ike ịgwa ya okwu. Naanị kpọọ ya na 325-446-1507.